ELK prefab imba
Tsvaga imba yekamuri ikozvino!
Imba yakagadziridzwa imba yeCONCEPT-M 159 yakaipa Vilbel
Villa muBauhaus style
ELK Bungalow 125 yemazuva ano nedenga rakabatirirwa
Der ELK Haus Bungalow 125 ine yakavakwa padenga rekuvakisa imba yazvino ELK yakavakirwa imba ine inenge 123 m² yenzvimbo yekugara uye yakazara makamuri 3. The angular bungalow
Nyika imba villa FORTESCUE pachikomo
Iyo yakasarudzika villa Villa FORTESCUE ye Baufritz ndeimwe imba yakavakirwa dzimba nedenga rekusisa muchigadzirwa chehuni. Imba yakavhomorwa muChirungu nyika imba inowanikwa pane imwe nzvimbo ine nzvimbo isina mugungwa.
Nyowani yakavakwa dhorobha DZINOGARA 134 V5 nedenga rakabatirirwa
Hunhu hweBien-Zenker prefab imba YEMAHARA 134 V5 ndiyo yemazuva ano imba dhizaina rakatsemurwa, bay hwindo uye yakafukidzwa turutsu ine mhanza. Nezvakatenderedza
Yakasvikika imba Chivakwa chitsva DZVANHU 134 V4 nedenga rakadzika
Iyo Bien-Zenker imba YEMAHARA 134 V4 ndiyo yemazuva ano imba yakavakirwa nedenga rakadzika, bay hwindo uye mhanza. Iine yakakomberedza 130 sqm yenzvimbo yekugara, imba yemhuri inopa yakawanda
Saddle denga reimba IZVI 134 V3 ine bay hwindo uye mhanza
Imba yemhuri ZVESVONDO 134 V3 kubva kune yakagara yakagadzirirwa imba muridzi Bien-Zenker ndiyo imba yazvino ine denga rakadzika, bay hwindo uye mhanza. Nezve 130 sqm yenzvimbo yekugara inopa iyo
Imba yakatsvagirwa DZIDZO 134 V2 ine gallery
Hunhu hweBien-Zenker prefab imba YEMAHARA 134 V2 ndiyo yemazuva ano imba yedenga nedenga rakadzika, gable oriel uye yakafukidzwa dura. Iine yakakomberedza 130 sqm yenzvimbo yekugara
Prefab villa ZVESVITSA 125 V5 nedenga rakashama
Iyo Bien-Zenker prefab imba yedhorobha YEMAHARA 125 V5 inomiririra yakamisikidzwa imba ine yekare yakarongedzwa denga, chena plaster façade uye inoshanda yekupinda bay hwindo. Iine yakakomberedza 125 sqm yenzvimbo yekugara
Contemporary gable padenga imba CHINANGWA 125 V4
Iyo yemazuva ano Bien-Zenker imba YEMAHARA 125 V4 imba yakajeka yemhuri-imwe ine denga rakaturika uye yakasarudzika plaster facade. Nezve 125 sqm yenzvimbo yekugara uye imwe
Family Single (553)
Apartment imba (3)
imba Two mhuri (50)
rupawo / Disclaimer / Privacy